बि.सं. २१०० (अंक १०)
“ओ माई गड, इट्स वन्डरफूल ल्यान्ड !” बसबाट झरेपछि युवतीले यहाँ भन्दा बढी एक शब्द अरू केही बोलीन । मलाई पनि उतिबेलाको गुर्जा गाउँ र यतिबेलाको गुर्जा नगरमा आकाश पातालको फरक लाग्यो । प्राकृतिक सुन्दरतामा मानिसको जादुमयी कलात्मकता मिसिदाँको परिणाम हुनुपर्छ – यो नगर ! यति बिघ्न परिवर्तन भएको हुनुपर्छ भन्ने मैले सोचेकै थिईन । म हुस्सु मान्छेले यहाँ आउनुभन्दा पहिले गुगलिङ गर्नुपर्ने थियो, कम्तिमा पनि केहि भिडियो र तस्बीरहरू हेरेर यो नगरका केही तस्बीर र भिडियोहरू हेर्नुपर्ने थियो । हतारमा घुमघामको कार्यक्रम बनाएर हुर्रिदै घुम्न आउँदा यात्रा धेरै अस्तब्यस्त हुँदो रै’छ भन्ने सिकाई भयो, यो पालीको घुमघाममा ।
हठात् मलाई जेट्लिनाको याद आयो, उसलाई वरिपरी हेरेँ । कतै देखा परिन । मन अलिकति आत्तिएर आयो । लाग्यो – केहि भन्दै नभनी हिडेकी उसको चिन्ता के गर्नु ? अरूको ख्याल नगर्ने मान्छेको एकोहोरो खोजी मैले मात्र के गर्नु ? अर्को मन लाग्यो, छोरीको उमेरकी युवती छे, छोरी नै नभएपनि छोरी जस्तै त हो नी । छोरी सम्झिएर भए पनि उसको ख्याल गर्नु मेरो दायित्व हो । तन्नेरी मन उम्लेर आयो – केको छोरी झैं हुनु ? त्यस्तरी लाडिएर बस्ने केटी ? यात्रा निरसलाग्दो नहोस भन्नलाई मसँग नजिक भई, अब गन्तब्यमा आइपुगेपछि मेरो वास्ता गर्नु उसलाई अनिवार्य लागेन । त्यसैले आफ्नो बाटो तताई । मलाई उसका बारेमा धेरै कुरा सोच्न कत्ति पनि ठीक लागेन । अतः नजिकैको क्याफेमा छिरे । एक कप कफि मगाएँ । र, बाटोमा पढ्दा पढ्दै छाडेको उपन्यासको पाना पल्टाउन थालेँ ।
मान्छेको धेरै भिड भएर हुनुपर्छ । कफि अझै आइपुगेको थिएन । मलाई होटल बुक गर्ने कुराले सताउन थाल्यो । बुक गरिसकेको होटलमा बुकिङ क्यान्सिलेशन गरिसकेको थिएँ, त्यही नखरमाउलीको भाउँतोमा । कती चेपारे घसेर भनेकी थिई, उसले – “अनि हजुरले होटल बुक गर्नुभयो त ? छैन भने मसँगै बस्दा पनि हुन्छ ... ।” झनक्क रिस उठ्यो उसको सम्झनामा । केहि बेर अगाडिसम्म ऊसँग भएका सबै प्रिय वार्ताहरू एकाएक फगत लाग्न थाल्यो । सायद, पुरूष मन उम्लिएर आएको यो पहिलो अवसर हुनुपर्छ । “सर, कफि ।” एकनाशले उपन्यास पढिरहेको मलाई कतै कतै सुनेकोझैं लाग्ने एक युवती आवाजले झस्कायो । आवाज आए तिर पुलुक्क फर्केर हेर्दा म त जिल्लै परेँ ! दुबै हातमा कफि समातेर जेट्लिना पो उभ्भिरहेकी !
“अरे, तिमी ..?” मलाई छक्क परेर आफूतिर हेरिरहेको पाएपछि जेट्लिनाले भनी – “ल के भयो ? म त हुँ नी । मलाई बसस्टपमा छाडेर बरु हजुर कता डिसअपिएर भा’को नी ?” कफिको दुवै कप टेबलमा राखी । झोलाभित्र बज्दै गरेको मोबाइल झिकी । र, कुरा गर्न थाली – “अँ म भर्खर आइपुगेँ । मसँग एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ .....।” मोबाइल वार्तालाप सिध्याए पछि भनी – “मलाई पिक अप गर्नका लागि कम्पनीको पि.आर. ओ. आएको थियो । पब्लिक रिलेशन अफिसर । ऊ एकदम हतारमा थियो । यसो हेरेँ, आफूलाई वरिपरी कतै देखिनँ । त्यो भएर अलिकति लामै गफ गरेँ ऊसँग । र, एउटा अनुरोध पनि, हजुरलाई यहाँ बसुन्जेल मसँगै बस्ने ब्यवस्था मिलाउन ...” बोल्दाबोल्दै एकैछिन रोकिई र फेरि भनी – “अरे कफि लिनु न ।” दुबै जनाले कफि पिउन थाल्यौं । चीसो ठाउँमा कफिको बेग्लै स्वाद महशुस गरेँ । “तपाइँ कता गायब हुनुभएको नी ?” कफिको पहिलो चुस्की लिएपछि उसले भनी । म बिलखबन्दमा परेँ । मलाई लागेथ्योँ, गायब त ऊ पो भएकी थिई । मैले जबाफ फर्काएँ – म कहाँ गायब हुनू ? गायब त तिमी पो भएकी थियौ नी । बसबाट झर्दा साथ तिमीले बोलेकै एउटै मात्र बाक्य सुनेँ, मैले । म शिकार खेल्ने पहाडमा चलिरहेको बिधुतिय केबलकारतिर नियाली रहेको थिएँ, तिमी अकस्मात गायब भयौ । यता उता हेरँे तिमी कतै पाइँन । अझ इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा, मलाई लाग्यो तिम्रो लहैलहैमा मैले होटल बुकिङ क्यान्सिलेशन गर्न पुगेछु ! धन्य भगवान, तिमी फेरि भेटियौं !” ऊ फिस्स हाँसी । त्यो हाँसो मलाई मन परेन । उसले भनी – “भनेपछि तपाइँले मलाई खोज्नु भयो, मैले तपाइँलाई । लौ इक्वएल भै गयो नि त !” यो कुरा चाँहि समझदारीको गरी उसले ।
कफि रित्तिसकेको थियो । र, शिसाको झ्याल बाहिर पर देखिएको पहाडमा अधेरी रातको आगमनले दिनलाई च्यापेर ल्याएको स्पष्ट देखेपछि, हामी त्यहाँबाट निस्किन आँट्यौं । पैसा तिर्न काउन्टरतिर बढेको मेरो पाईला टक्कै अडिए, ‘वाइड रेन्जको नोटिस डिस्प्ले’ मा मेरा आँखा दगुरे – “फस्ट पे देन अर्डर !” जेट्लिनालाई हेर्न पुगेँ, ऊसले मेरो दुर्भाग्य चालपाइसकेकी थिई । त्यसैले, फिस्स हाँसी फेरि । लाजले शिरनत भयो मेरो । दुबैजना बाहिर निस्क्यौं । देब्रेतिरबाट चलेको चीसो साँठले भित्रैसम्म कपायो ।
एउटा सग्लो रात(कथा)
आषाढको एक शुक्रबारको साँझ बिश्वविद्यालयबाट घरतिर फर्कने क्रममा अलि ढिला भो । घरसम्म पुग्नलाई माइक्रो, अनि नगर बस सबैको आवातजावत बन्द भैसेकेको थियो । हिडेर एक घण्टाको पैदल यात्रा गर्ने दुस्साहस मैले गरिनँ । त्यसकारण, ट्याक्सीको पखाईमा त्यसै उभिरहेको थिएँ । आडैमा एउटी युवती आई । मतिर पुलुक्क हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराई । मैले पनि मुस्कुराएरै उसको आगमनको स्वागत गरेँ । सोधी – “दाई ट्याक्सी कुर्नुभएको ?” “हजुर ।” मैले जवाफ दिएँ । “म पनि ट्याक्सी वेट गरिराखेको हेर्नु न अहिलेसम्म एउटा भेटेको छैन ।” युवतीले दुखेसो पोखी । मैले प्रश्न गरेँ – “कहाँ जानुपर्ने ?” “धेरै टाढा त हैन, मुस्ताङचोकसम्म पुग्नुपर्ने थियो ।” जवाफमा उसले भनी । उसको मुखबाट मुस्ताङचोक फुत्कदाँसाथ ममा नजानिदो उत्साह बढेर आयो । भनेँ – “ए, हो र ? म पनि त मुस्ताङचोक नै जान लागेको नी !” “ला हो र ? उसो भए त मज्जा भो नी, हजुर अनि मेरो दुवैको फिप्टी प्रसेन्टेज पैसा सेभ हुने भो नी त । एक्लै जाँदा त ४०० लिन्छ । अब दुई सयमै पुगिने भईयो ।” उसले खुशी ब्यक्त गरी । मैले पनि समर्थन जनाएँ – “हो त ।” अनि यो पनि जान्न चाहेँ कि ऊ के गर्छे ?